Ibhedi e-1 eyi-1-ibhafu yabucala yokungena ngasemva kwendlu yeendwendwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSam&Susan
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uSam&Susan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yiza uzonwabele le yunithi inebhedi e-1. Igumbi lokulala elipholileyo neliqaqambileyo elinebhedi e-Queen etofo-tofo.Igumbi lokuhlala linendawo yokutyela ezinikeleyo kunye nendawo yokuphumla enesofa kunye nomabonakude.Ikhitshi libandakanya imicrowave,ioveni encinci kunye nek- ikomityi ikofu umenzi, kodwa Akukho ISITOVE.
Le ndlu yeendwendwe iyinxalenye yendlu yosapho olunye. Indlu eshiyekileyo ikwaqeshwa njengeyunithi ka-Airbnb kodwa inomnyango owahlukileyo. Indawo yomgangatho kuphela kunye nenkqubo yokufudumeza okwabelwanayo ngayo. Indawo yokungena yeendwendwe isemva kweyadi.
Uzijongile kwaye uphume
Ndiza kuthumela igama lokugqitha lephedi phambi kosuku olunye.
4.82 · Izimvo eziyi-57
Indawo ekhuselekileyo nethe cwaka eTara Hill, eSan Pablo.
Kufuphi neevenkile zegrosari, iindawo zokutyela, iHwy80 &Hwy 4. Kumgama oziikhilomitha ezisi-7 ukusuka kuThutho loLuntu (iRichmond kunye ne-El cerrito BART), iimayile ezili-13 ukusuka eDowntown Berkeley.......
Umbuki zindwendwe ngu- Sam&Susan
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Pablo